OPPO sonyeere Google's CameraX Initiative | Gam akporosis
Igwefoto Google's nwere enyi ọhụrụ: OPPO sonyere na atụmatụ ahụ
N'ime oge ndị mmepe Google ụbọchị China nke afọ a 2019, anyị ahụla ụfọdụ akụkọ na-atọ ụtọ. Na, Asia emeputa bụghị nanị iji ihe omume iji chee na OPPO A9 na mgbakwunye na Oppo A5, ma chọrọ inye ozi ọma maka ndị ọrụ nke ika ahụ.
Ọ bụkwa na OPPO ka kwuputara na ọ ga-eso n’otu ụlọ ọrụ na-agba nzọ IgwefotoX nke Google. N'oge ahụ, OPPO Reno 2 na OPPO Reno 10x Zoom Ha ga-abu ndi mbu ga esonye n’atumatu america a.
Mana kedu ihe igwefoto nke Google na kedu ihe OPPO ga enweta?
Anyị na-ekwu maka arụmọrụ nke ga-enye anyị ohere iji ọrụ nke igwefoto ekwentị na ngwa mpụga ọ bụla. N'ụzọ dị otú a, ọ bụrụ na anyị chọrọ iji foto were foto WhatsApp, anyị ga-enwe ike ịnụ ụtọ elele nke sọftụwia nke ụdị ndị nrụpụtara emepụtara n'elu.
Nke a bara uru nke ukwuu mgbe ị na-ese foto na gburugburu ọkụ, ebe anyị nwere ike ịhọrọ ọnọdụ abalị, ma ọ bụ iji ohere HDR nke ọtụtụ igwefoto na-eji na ahịa. Ihe kacha mma bụ na, Igwefoto Google ọ dị mfe iji mejuputa na ọ na-ewe ọtụtụ ahịrị nke koodu iji ya. Na OPPO agaghị echefu ohere a.
N'ụzọ doro anya, ọ bụ mmegharị nke ichere. Ọtụtụ na-atụle na oge ọ bụla anyị jiri ọrụ izi ozi ozigbo, ma ọ bụ netwọkụ mmekọrịta. Ee ee, Instagram ga-adọrọ mmasị karị mgbe anyị nwere ike ime ka ụfọdụ ọrụ nke igwefoto nke ekwentị anyị rụọ ọrụ, yabụ a ga-atụ anya na ọtụtụ ndị nrụpụta ga-esonye na atụmatụ ahụ na OPPO.
Maka ugbu a, onye nrụpụta gosipụtara na ọ bụ naanị ekwentị abụọ OPPO Reno 2 na OPPO Reno 10x Mbugharị ha ga-adaba na Google's CameraX. Mana, na-eburu n'uche na ngwaọrụ ọ bụla nwere gam akporo 5.0 Lollipop ma ọ bụ karịa kwekọrọ, ihe ezi uche dị na ya ga-abụ na n'oge na-adịghị anya, ụdị ọhụrụ ga-esonye na nke a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Igwefoto Google's nwere enyi ọhụrụ: OPPO sonyere na atụmatụ ahụ
Redmi 8A ga-etinye nnukwu batrị nke 5000 mAh na ndị ọzọ, dịka ndepụta TENAA